यौन सम्पर्कको बेला महिलाहरु आँखा चिम्लने गर्दछन् किन ? जानिराखुम - Charchit Entertainment!
Home ijob यौन सम्पर्कको बेला महिलाहरु आँखा चिम्लने गर्दछन् किन ? जानिराखुम
यौन सम्पर्कको बेला महिलाहरु आँखा चिम्लने गर्दछन् किन ? जानिराखुम
Anonymous July 20, 2019 ijob,
यौन सम्पर्कको बेला महिलाहरु आँखा चिम्लने गर्दछन् । पुरुषहरुको मनमा एउटा प्रश्न उठ्छ, आखिर महिलाहरु किन आँखा चिम्लन्छन् रु कतिपयले आँखा बन्द नगर्न सक्छ । यदि आँखा बन्द गर्दैन भने केही न केही यौन समस्या छ भनेर पनि बुझ्ने गरिएको छ । त्यसो भए के यौन सम्पर्कको क्रममा महिलाले आँखा चिम्लनैपर्छ रु किन उनीहरु आँखा चिम्लन्छन् ? के छ यसको कारण ?
एक शोधका अनुसार जसै हाच्छ्यिु गरिन्छ, त्यसमा हाम्रो कुनै नियन्त्रण हुँदैन । हाच्छ्यु गरिरहँदा हाम्रो आँखा बन्द हुन्छ, यो स्वतस्फूर्त हुने क्रिया हो । ठिक यसैगरी महिलाहरु यौनमा चरमसुखको बेला आँखा खोल्न सक्दैनन् । खासगरी यसबेला उनीहरुको ग्ल्यान्डबाट तरल स्रावित हुन्छ, जसले दिमागलाई आँखा बन्द गर्नका लागि सन्देश पठाउँछ ।
एक सर्वे अनुसार कुनै महिला यदि यौन सम्पर्कका क्रममा आँखा बन्द गर्छन् भने यसको अर्थ हुन्छ कि उनले यौन सम्पर्कको पुरापुर आनन्द लिइरहेका छन् । शोधबाट यो कुरा थाहा भएको छ कि, आँखा बन्द हुनुसँग दिमागको गहिरो सम्बन्ध छ ।
यस्तो मानिन्छ कि, यदि दिमाग खुला रहन्छ भने महिलाको ध्यान पार्टनरमाथि पर्न जान्छ । यसले उनको ध्यानभंग हुन्छ । त्यहीकारण उनीहरु क्लाइमेक्ससम्म पुग्न पाउँदैनन् ।
यौन सम्पर्कका क्रममा दम्पती एकअर्कावीच एकाकार भएको अनुभूत गर्छन् । उनीहरु आफुहरुवीचैका इन्टीमेसी र केमेस्ट्रीमा इन्जोए गरिरहेका हुन्छन् । यौन सम्पर्कका क्रममा उनीहरु पार्टनरलाई सहयोग र सुरक्षा महसुस गराउन चाहन्छन् ।
यौन सम्पर्कका क्रममा एकाग्रता एकदमै जरुरी हुन्छ । आँखा खुला हुँदा बाहिरी चिज एवं आवाजले यौनप्रतिको ध्यान भंग गरिदिन्छ । त्यसैले यौन सम्पर्कका क्रममा महिलाहरु आँखा बन्द गर्छन् ।
यौन सम्पर्कका क्रममा महिलाहरुले आँखा चिम्लनुमा लाज पनि एउटा कारण हुनसक्छ । यद्यपी यस्तो लाज भने पहिलो पटकको यौन सम्पर्कमा हुने गर्छ । आफुलाई सर्वाङ्ग बनाइरहँदा उनीहरु लजाउँछन् । असहज महसुस गर्छन् । त्यही कारण उनीहरु आँखा चिम्लन्छन् ।
By Anonymous at July 20, 2019